Nin Toorey ku dilay Haweeney 70-sano jir ah oo gacanta lagu dhigay * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamada amaanka maamulka Galmudug ayaa gacanta ku dhigay nin la sheegay in gurigeeda uu ku dhax dilay Haweeney 70- sano jir ah oo kunooleed deegaanka Bitaale ee Duleedka Magaalada Gaalkacyo.
Ninkan dilka geestay oon magaciisa la shaacin ayaa gurigeeda ku dhax dilay Booto Faarax Cabdi oo 70-sano jir aheyd, walina lama oga sababta ka dambeysa dilka haweeneydan da’da aheyd loo geestay.
Cali Faarax Cabdi oo la dhashay Haweeneyda la dilay ayaa sheegay in nin toorey watay uu walaashiis ku dhax dilay gurigeeda, waxa uuna sheegay in wali aysan aqoon sababta walaashiis loo dilay.
Waxa uu sheegay Cali in Ciidamada amaanka maamulka Galmudug hada gacanta ku hayaan ninka dilka fuliyay, isagoona meesha ka saaray in ninka dilka geestay uu yahay ruux madaxa looga jiro.
Maamulka Galmudug ayaan wali ka hadlin dilkan ka dhacay duleedka magaalada Gaalkacyo, waxaana la filayaa ninka dilkan ku eedeesan in maxkamad lasoo taago laguna qaado kiiska dambiga loo heesto.